Akụkọ - Ihe ekwesịrị ị paida ntị na ya mgbe ị na-agba ọsọ na mmanụ diesel ọhụrụ
Ihe ekwesiri ị paida ntị na ya mgbe ị na-agba ọsọ na generator ọhụrụ
Maka onye na-ewepụta mmanụ diesel ọhụrụ, akụkụ niile bụ akụkụ ọhụụ, ebe ikuku anaghị adịkwa mma. Ya mere, a ga-arụ ọrụ n'ime ọrụ (nke a makwaara dị ka ịgba ọsọ na arụ ọrụ).
Ninggba ọsọ na ịrụ ọrụ bụ iji mee ka generator dizel na-agba ọsọ maka oge ụfọdụ n'okpuru obere ọsọ na ọnọdụ dị ala, iji jiri nwayọ na-agba n'etiti ihe niile na-akpụ akpụ nke mmanụ dizel ma jiri nwayọ nweta ọnọdụ dabara adaba.
Ninggba ọsọ na ọrụ dị nnukwu mkpa maka ntụkwasị obi na ndụ nke onye na-ewe mmanụ diesel. Ngwa ọrụ ọhụrụ na overhau engine nke onye na-emepụta mmanụ diesel agbabala ma nwalee tupu ya ahapụ ụlọ ọrụ ahụ, yabụ na ọ dịghị mkpa maka ogologo ọrụ na-adịghị arụ ọrụ. Ma, injin dizel ahụ ka na-arụ ọrụ na steeti na mbido ogbo ojiji. Iji mee ka ọsọ nke ọnọdụ nke igwe ọhụrụ dị mma ma gbatịkwuo ndụ ọrụ ya, ekwesịrị ị followinga ntị n'okwu ndị a na mbido ojiji nke igwe ọhụrụ ahụ.
1. N'ime oge ọrụ 100h mbụ, ọrụ ọrụ kwesịrị ịchịkwa n'ime oke nke ike 3/4 gosiri.
2. Zere ịnọ nkịtị ruo ogologo oge.
3. Lezienụ anya iji nyochaa mgbanwe nke usoro ọrụ dị iche iche.
4. Na-enyocha ọkwa mmanụ na mgbanwe mmanụ mgbe niile. Oge mgbanwe mmanụ kwesịrị ịdị mkpụmkpụ na ọrụ mbụ iji gbochie iyi akwa dị njọ nke ngwongwo ígwè ndị agwakọtara na mmanụ. Ohaneze, mmanụ a ga-agbanwe otu mgbe mgbe 50 awa nke mbụ ọrụ.
5. Mgbe ọnọdụ ihu igwe dị ala karịa 5 ℃, a ga-eme ka mmiri dị jụụ kpoo ọkụ iji mee ka mmiri dị elu karịa 20 ℃ tupu ịmalite.
Mgbe ha gbasịrị, jenerato setịpụrụ ga-agbaso usoro ọrụaka ndị a:
Unit ahụ ga - enwe ike bido n’ọsọ n’enweghi ntụpọ;
The unit na-arụ ọrụ stably n'ime gosiri ibu enweghị mkpumkpu ọsọ na ndiiche ụda;
Mgbe ibu gbanwere ngwa ngwa, ọsọ nke mmanụ dizel nwere ike ime ngwa ngwa. Ọ naghị efe efe ma ọ bụ woli mgbe ọ na-ebu ọnụ. Mgbe ọsọ na-adịghị, injin ahụ agaghị akwụsị na cylinder ahụ agaghị arụ ọrụ. Ntughari n'okpuru ọnọdụ ibu dị iche iche kwesịrị ịdị mma ma kpochapụ ụcha anwụrụ ọkụ kwesịrị ịdị mma;
Mmiri mmiri jụrụ oyi dị nkịtị, ibu nrụgide mmanụ na-ezute ihe ndị achọrọ, na ọnọdụ okpomọkụ nke akụkụ niile na-ete mmanụ bụ ihe nkịtị;
Enweghị mmanu mmanụ, nkwụsị mmiri, nkwụsị ikuku na ọkụ eletrik.
Okwu: 17F, nke 4 ụlọ, wusibei Tahoe plaza, 6 Banzhong ụzọ, Jinan district, Fuzhou obodo, Fujian Province, China